Majare-habaabinta & Muranka Xeerka Kufsiga Somaliland – somalilandtoday.com
Xeerkan oo aan akhriyey dhamaan Qeybihiisa kala duwan, qodobadiisa & faqradaha ay ka kooban yihiin marka hore
waan bogaadinayaa waanan soo dhaweynayaa madaama ay falalka kufsiga iyo xadgudubka jinsigu isasoo tarayaan sanadba sanadka ka danbeeya laguna xaliyo habab aan munaasab ahayn oo keenaya in lagu dhiirado in falalka caynkaasi sii kordhaan marka talaabo laga qaadi waayo dhib gaystayaasha kiisaska xadgudubyada Jinsiga.
1. Iyaga oo aan sheegin falka lagula kacay cabsi ay ka qabaan waxa ay la kulmi doonaan.
2. Cida ay u gudbinayaan dacwadooda oo aan xil iska saarin sirta dhibanaha ama aan marin anshixii ku haboonaa ee loo darsi lahaa kiisaska noocan oo kale ah.
3. Iyaga oo aan helin cadaalad u hiilinaysa oo Eedaysanaha/eedaysanayaashana layska sii daayo kadib marka odayaashu ka fadhiistaan arrinka, xaalna la kala qaato.
4. Hanjabaad & hadadaad kaga timaada Dhibgaystaha/gaystayaasha & IWM
“Qof aan awoodin in uu ogolaansho bixiyo” waxa loola jeedaa
Sidoo kale waxa iyana ku jirta “Caruur” waxaa loola jeedaa qof da,diisu ka yartahay 18 jir (Xeerka Kufsiga, 2018)
1 Qofkasta oo
B. Isticmaalaya xoog, qasab ama hanjabaad kula kaca galmo aan sharci ahayn qof kale oo aan ogalayn raalina ka ahayn
t. Kula kaca galmo aan sharcigu banayn qof kale oo aan awoodin bixinta raali ka ahaanshiyo waxa uu galay fal danbi kufsi, waxaana uu mutayasanayaa ciqaab xabsi ah oo u dhaxaysa shan & toban ilaa labaatan sanadood. (Xeerka Kufsiga, 2018)
Qodobkani waxa uu ka mid yahey qodobada aadka carabka loogu soo celcelinayo iyada oo la leeyahay lamaanihii isqabey ayuu saameyn toosa ku leeyahay balse waxa meesha ku jirta kalmada “SHARCI AHAYN”, dabcan dadka is qabaa sharci bay isku qabaan markaa saameyn kuma laha sida aan qabo.
Eedaysanaha oo ah mid la sakhraamiyay. Way jiraan kiisas noocan oo kale ah oo dhacey in qof maandooriye loogu daro cabitaan oo ku kaco falal kuwan oo kale ah balse inta danbe ee sii raacsan oo ah “ahaana qof sakhraansan markii uu danbiga galayay” waxa ay jidaynaysaa in la helo marmarsiiyo kale oo ah inuu sakhraansanaa amaba madmadaw keenaya in khamriga & maandooriyayaasha la dhiiri galinayo markaa in inta hore lagu daayo ama aad loo cadeeyo ayaa qurux badan.
Dad baa ku doodaya in diinteenu jidaysay in cida falalkan oo kale gaysata ciqaab tan xeerku sheegayo tu kadaran in la mariyo. Bal Allaan idinku dhaarshee ma maqalnay qof gafay oo shareecada Islaamka & kitaabka intoo loo eegay la mariyey wixii uga yaaley?!… Markaa ma maanta markii la yidhi hala xidho ayaynu ka qeylinaynaa? Su,aali waxay iga tahey waagii hore diinta Islaamka miyaynaan haysan maxaa in uun loo arki waayey wadaad ka dhiidhiyaya dhibta taagan ee hablihii tukaanka daqiiqda looga direy ay nabad galyo ugu soo noqon la, yihiin guryahoodii.